ARAG: Wixii uu xalay sameeyay Van Dijk markii uu Maxamed Saalax…….+Sawirro – Gool FM
Maxaa ka jira in Chelsea ay xiiseyneyso adeega Luka Jovic?
Real Madrid oo xiddig ka tirsan Arsenal ka horjoogsatay inuu ku biiro koox kala dhisan Spain
VIDEO: Kooxda Dekedda oo ku jirta diyaar-garowgeedii ugu dambeeyey ka hor kulanka ay la leeyihiin Horseed
Waa kee ciyaaryahanka si cad u doonaya inuu ku biiro kooxda Manchester United?
Bayer Munich iyo Arsenal oo ku loolamaya saxiixa xiddiga kooxda….
Xoghayihii hore ee GOS oo munaasabad dhiiri gelin ah u sameeyay cayaaryahanno Soomaaliyeed…+ SAWIRRO
Georginio Wijnaldum oo albaabada u furay in uu isaga hayaamo Liverpool
Kooxda Manchester United oo dib u soo ceshanaysa Alexis Sanchez
ARAG: Wixii uu xalay sameeyay Van Dijk markii uu Maxamed Saalax…….+Sawirro
Byare April 18, 2019
(England) 18 Abriil 2019. Liverpool ayaa si sahlan ugu soo gudubtay wareega afar dhammaadka Champions League kaddib markii ay FC Porto uga adkaatay 6-1 isku cel celis labada lug ee wareega sideed dhammmaadka.
Maxamed Saalax ayaa dhaliyay goolka labaad ee ciyaartii xalay ay afarta gool ku adkaadeen, balse isla markii uu lugta ku dhigay kubbada inta uusan xitaa dhalin goolka waxaa sii dabaal degay Van Dijk, malaha kalsooni badan ayuu ku qabaa xiddiga reer Masar.
Kaamirooyinka ayaa soo qabtay daafaca reer Holland oo labada gacmood kor u taagaya isagoona ku dabaal degaya meel aan xitaa u dhaweyn goolka Porto markii uu Saalax lugta ku dhigay kubbada.
Maxaad kala socotaa inuu khilaaf soo kala dhex galay Maxamed Saalax iyo Jurgen Klopp isla markaana uu Laacibka dalbaday in....!!!??